I-CRASHPAD YOMDOBI - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Adela
U-Adela Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa ku-Fisherman's Crashpad, ikhaya elihle elinamagumbi okulala amathathu emlonyeni woMfula iKenai!Le ndawo ebanzi iwuhambo lwemizuzu emi-5 nje ukusuka eSouth Beach, indawo yokudoba edume umhlaba wonke yabo bonke abanethemba lokucwiliswa emanzini ukuze bathole i-salmon emnandi yase-Alaska.Itholakala kalula, izikhungo zokuthenga nezindawo zokudlela ziwuhambo lwemizuzu eyi-10-15 nje. Hamba, udobe futhi uhlole okomuntu wase-Alaska wangempela ngesikhathi uhlala kuleli khaya elisenkabeni yeNhlonhlo ye-Kenai!
Uzoba nalo lonke ikhaya lakho kanye nabavakashi bakho. Lokhu kuhlanganisa amagumbi okulala amathathu, igumbi lokugezela elilodwa, ikhishi elikhulu elinendawo yokudla kwasekuseni, igumbi lokudlela eliseduze, kanye negumbi lokuphumula elibanzi.Isitezi esiphezulu sifaka ukubukwa kwe-peak-a-boo ye-Mount Redoubt edumile kanye ne-Aleutian Range ezungezile.Itholakala endaweni ecishe ibe ngamahektare amabili, uzojabulela ukuthula kwasehlane lase-Alaska (Gcina inyamazane ehlala izulazula endaweni).
Ikhaya lethu laklanyelwe ukunxenxa ukuzidela nokudala. Ngaphakathi uzothola umsebenzi wobuciko ophefumulelwe imvelo ovela kumaciko ase-Alaskan afana no-Katie Sevigny no-Dawn Gerety, kanye nezithombe zoqobo zezwe kanye neminye imiklamo eyingcaca evela ohambweni lwethu lomhlaba wonke.Noma ngabe ulapha ukuze uthole ukubaleka okuthulile noma uhambo lwasendle, leli khaya ngokuqinisekile lizoba yindawo yakho!
4.91 · 76 okushiwo abanye
Ngeke sitholakale mathupha, nokho, uma kwenzeka kuvela izinkinga, sizotholakala ngomlayezo!
UAdela Ungumbungazi ovelele